उज्ज्वल प्रसाईं जतिसुकै महत्वपूर्ण विषय हुन्, तिनलाई सम्बोधन गर्न हामी ‘काम चलाउ’ तरिका अपनाउँछौं। यो नेपाली समाजको संस्कार बनिसकेको छ। सरकार, सरकारका सबै अंग, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, सबै
– रामप्रसाद सिटौला (फलित ज्योतिष) मेष कार्य सञ्चालनमा उत्पन्न बाधाहरू सोमबारपछि फुक्दै जानेछन् । सरोकार नभएको कार्यले फजुल खर्च गराउनेछ । विशेष छुटमा भैतिक साधन खरिद गर्ने अवसर जुट्न सक्छ
पत्रकारिताको अनुभवले लेखक बनायो : तीर्थ सिग्देल
तपाई कस्तो लेखक हो ? यस पटकको पुस्तकमा त्यस्ता के बिषय समेटिएका छन् ? कुनै पनि कामको अनुभवले नयाँ नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्छ । त्यसले कामले जव सफल रुप लिन्छ,
बिबाह सन्तुष्टि की सन्तानका लागि ? ( कथा )
तीर्थ सिग्देल जीवनको गति जसोतसो अघि बढ्दै हुन्छ । मान्छे हो, मान्छेको जुनी लिएपछि मानवीय कर्म त गर्नै पर्छ । तर, मान्छे संसारकै उत्कृष्ट र ज्ञानी जात हो, मान्छेहरु नै
त्रिफलामा एकैदिन आधादर्जन कृति विमोचन
धुलाबारी, माघ ८ । सरस्वती पुजाको अवसरमा झापाको धुलाबारीस्थित त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालयमा विभिन्न कृतिहरु विमोचन गरिएको छ । सरस्वती पुजा तथा कृति विमोचन कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल तथा भारतका स्रष्टाहरुले
यात्रा अनुभव : ‘स्वर्ग रहेछ नेपाल, दयालु रहेछन् नेपाली’ (फोटो फिचर)
म्याक्स अभय पोख्रेल । घुम्ने रहर सानैदेखि, कसैले कतै घुम्न जाउँभन्दा सायद नै कसैलाई नाइँ भनेँ होला । नयाँ ठाउँ पुगेर नयाँ ठाउँ जानुको मज्जा बेग्लै लाग्थ्यो । एक दुई
तस्विरमा हेर्नुहोस् नाटक लाटिको छोरो
नाटक लाटिको छोरो श्याम शाह द्वारा लेखिएको कृतिबाट निकालिएको एउटा अंश हो । मण्डला नाटकघरमा प्रदर्शन गरिएको नाटक लाटिको छोरो विर्तामोडमा पनि देखाइएको थियो । सफर पोखरेल, जिया लामा र
कथा – प्रेमनगरी
–निराजन प्रभात बिहानै उठे मोबाइल चेक गरे एस एम एस थिएन,फेसबुक खोले त्यहाँ नि थिएन ।इमो भाइवर कतै उनको म्यासेज थिएन । हैट केटाको आइडियाले काम गरेछ मक्ख पर्दै धन्यवाद
लघुकथा : आश्रम
निरज दाहाल बा बोल्नुभएन आमा सँग नौ महिना । आमा गर्भवती भएको दिनदेखि गाउलेलाई भोज खुवाउन भनेर पालिएको दुईवटा खसी पनि बेचियो । कारण बा ले भने जस्तो भएन वा
दलिय एकताका लागि शुभकामना ।
गोविन्द न्यौपाने-नेपालमा दहरु हाल सम्म करिव २ सयको संख्यामा पुग्ने अवस्थामा दलिय धु्रविकरण अत्यन्त आवश्यक नै हो । कम्तिमा अव थ्रेसहोलडका कारण पनि दलहरु एक आपसमा मिल्न वाध्यहुनुको विकल्प छैन